Deg deg: Kheeyre oo la weeraray asigoo la hadlaya shacabka Marko! | SMC
Home WARARKA MAANTA Deg deg: Kheeyre oo la weeraray asigoo la hadlaya shacabka Marko!
Deg deg: Kheeyre oo la weeraray asigoo la hadlaya shacabka Marko!
Bam gacmeed ayaa maanta lagu tuuray barxadda xarunta degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose JBM, halkaasi oo uu khudbad ka jeedinayey ra’iisul wasaraaha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo booqasho ku jooga magaalada. Bamka oo uu soo tuuray askari goobta taagnaa ka tirsan guutada 14-ka Oktoobar ee uu gaar u dhistay madaxwayne Farmaajo ayaa meesha ka baxsaday, taaso laga fahmi karo inay madaxwaynaha ay si weyn isu hayaan isaga iyo raysal-wasaarahaayaa dhanka tartanka doorashada madaxweyninimada dalka hadda kambeynkiisu socdo, waxaana Farmaajo Dhuusamareeb u safri raba dhowaan si uu lugta u soo mariyo meelihi uu Kheyre horay u tagay wixii uu soo xirxirtay u furfuro ay ka go’antahay inuu daaqadda ka saaro wasiirka 1aad, xataa hadday dil tahay sida ka dhacday Marka Caddey maanta sida ay goob-joogeyaal u xaqiijiyeyn Southern Media. Qaraxa bamka ayaa la sheegay in dhaawacyo fudud uu kasoo gaaray qaar ka mid ah ilaalada ra’iisul wasaaraha. Ra’iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay naftiisu khatar u gashay goobta in dadkiisa lags qaado, balse uu naxay oo uu joojiyey khudbaddii.
Dadkii meesha joogay ayaa kala cararay, waxaana kadib dhacay rasaas xooggan oo ay fureen ciidamada Amisom iyo kuwa ilaalada u ah Kheyre, oo garan waayey halka looga yimid. Ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa ku qasbanaatay inuu soo geba gebooyo khudbaddiisa islamarkaana goobta qaraxa ay kala cararaan ciidamadiisa iyo kuwa Amisom. Illaa iyo hadda lama yaqaan cidda qaraxa ka dambeysay iyo sida ay ugu suurta-gashay inuu bam kula soo dhowaado halka uu Kheyre ka hadlayey. Weli ma jiro wax war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska Kheyre oo ku aadan dhacdadan. Dhanka kale, wafdiga Ra’iisul Wasaare Kheyre markii ay gudaha u galeen Marka waxaa magaalada qeybo ka mid ah lagu garaacay madaafiic, inkastoo aan weli la xaqiijin khasaaraha ka dhashay. Ra’iisul wasaaraha ayaa maalmahan booqasho ku marayey qaar ka mid ah magaalooyinka dalka, isaga oo wada dadaallo u eg olole doorasho, xilli uu qorsheynayo inuu madaxweyne isku sharxo 2021.
Previous articleCabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen Oo Gaaray Marka Iyo Soo Dhaweyn Loo Sameeyay
Next articleRW Kheyre oo Gurmad Deg Deg Ah looga diray,